6 मा कोपेनहेगनका 2021 सर्वश्रेष्ठ होटल यात्रा समाचार
कोपेनहेगन मा6सर्वश्रेष्ठ होटल
Cओपेनहैग डेनमार्कका सब भन्दा प्रसिद्ध शहरहरू मध्ये एक हो। वातावरण यसको सडकमा सास फेरेको छ र को मात्रा योजनाहरु प्रस्तुत गरियो डेनिसको राजधानीलाई केही दिन छुट्टीमा बिताउनको लागि एक धेरै आकर्षक विकल्प बनाउनुहोस्। यद्यपि प्राय जसो अन्य शहरहरूमा उच्च पर्यटक आकर्षणको साथ हुन्छ। केन्द्रबाट धेरै टाढा नभएको एउटा सस्तो होटल फेला पार्नुहोस् यो एक दुःस्वप्न हुन सक्छ। तसर्थ, हामी तपाईंलाई कोपेनहेगनमा best उत्तम होटलहरूको सूची प्रस्ताव गर्दछौं, सस्तो आवास र शहरको केन्द्रको नजिक।
1 होटल सिटिजनम कोपेनहेगन राधस्प्लासेन
2 जेनेरेटर कोपेनहेगन
4 Aperon अपार्टमेन्ट होटेल
5 Wakeup कोपेनहेगन- Bernstorffsgade
6 Br Otchner होटल द्वारा होटल ओटीलिया
होटल सिटिजनम कोपेनहेगन राधस्प्लासेन
उत्तम विकल्प यदि तपाईं कोपेनहेगनको केन्द्र नजिक गुणस्तरीय र होटलहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। अवस्थित शहरको बीचमा, हाेटल CitizenM कोपेनहेगन Radhuspladsen एक धेरै रोचक आवास छ यदि तपाईं सस्तो मूल्यमा आराम खोज्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि कोपेनहेगन सस्तो शहर होइन। यद्यपि यस होटलको लागि दर, star-तारे होटलको लागि, धेरै उचित छ र बिहानको खाजा समावेश गरिएको छ। अर्कोतर्फ, यसको स्थान आदर्श छ यदि तपाईं यातायात मा धेरै समय बर्बाद बिना पर्यटन को यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ। होटल टिवोली गार्डेनबाट 600०० मिटर मात्र अवस्थित अवस्थित छ, यो युरोपको सब भन्दा पुरानो मनोरञ्जन पार्क हो जुन निस्सन्देह यो शहरको तपाईंको भ्रमणको मुख्य बिन्दुमध्ये एक हो।
एक शक बिना, को सबै भन्दा राम्रो CitizenM कोपेनहेगन राधुप्लासेन यसको आधुनिक र रंगीन सजावट हो यसले आफ्ना आगन्तुकहरूलाई डेनिश कलाको नजिक ल्याउँदछ. यात्रा नियमितबाट विच्छेदन गर्नका लागि एक उत्तम तरिका हो, जब हामी यात्रा गर्छौं हामी नयाँ चीजहरू पनि सिक्न खोज्छौं र अन्य संस्कृतिहरूको साथ सम्पर्कमा रहन्छौं। यस होटलको भित्ताहरू तिनीहरू डेनिस कलाकारहरूले चित्रकला र भित्ते चित्रमा ढाकिएका छन्। यसैले, पाहुनाहरूको बसाई एक अनुभव बन्छ जुन उनीहरूलाई डेनमार्कको संस्कृतिको बारेमा अधिक जान्न अनुमति दिन्छ।
आदर्श विकल्प यदि तपाईं कोपेनहेगन र नाइटलाइफमा सस्तो होटल खोज्दै हुनुहुन्छ भने। जेनेरेटर कोपेनहेगन को लागी एक उत्तम आवास छ जवान मान्छे जो एक ठाँउमा रहन चाहन्छ जुन विश्वसनियता र रमाईलोको लागि डिजाइन गरिएको हो। आश्रय यो एक महान रात पट्टी छ जसमा घटनाहरू, कराओके र डीजे प्रदर्शनहरू आयोजित छन्, यो ककटेल पाउन, अन्य यात्रुहरूलाई भेट्न र राम्रो संगीतको आनन्द लिनको लागि एक आदर्श स्थान हो। यो एक ठाउँमा मात्र सुत्ने ठाउँ छैन, तपाईं होस्टल भित्र धेरै जीवन कमाउन सक्नुहुन्छ।
जहाँसम्म तपाई बाहिर जान चाहानुहुन्छ, हिड्न र शहर जान्न चाहानुहुन्छ भने यो आवास पनि राम्रो विकल्प हो। यो कोजेन्स न्यटोरभ मेट्रो स्टेशनबाट just मिनेट मात्र अवस्थित छ र धेरै नजिक फ्रेडरिक्स किर्के (मार्बल गिर्जाघर) र अमालिएनबर्ग दरबार, तपाईंको शहरमा तपाईंको यात्राको लागि आवश्यक छ।
सस्तो कोठा साझा गरिएको छ, केहि समस्या छ भने यो समस्या हुन सक्छ यदि तपाईं यस प्रकारको होस्टलहरूमा सुत्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्न। यद्यपि, अधिक गोपनीयता चाहिनेहरूको लागि होस्टल निजी कोठा रिजर्भ गर्न पनि प्रदान गर्दछ। जेनेरेटर कोपेनहेगनको अर्को फाइदा यो हो रिसेप्शन २ hours घण्टा खुला छ, त्यसैले यदि तपाईले त्यसो गर्नु परेमा तपाईलाई कुनै समस्या हुने छैन चेक इन वा चेक आउट बिहान ढिलो
राम्रो ग्राहक सेवाको साथ कोपेनहेगनमा सस्तो होटल खोज्नेहरूको लागि राम्रो विकल्प। सिटीहब कोपेनहेगन एक आधुनिक होटल हो जुन व्यक्तिगत ध्यान को लागी खडा छ तिनीहरूले आफ्नो ग्राहकहरु लाई प्रस्ताव गर्छन्। कोपेनहेगनका धेरै होटेलहरूले आफ्नो सेवाहरू सुधार गर्न दिनदिन टेक्नोलोजी समावेश गरेका छन्, केहीले आफ्ना पाहुनाहरूलाई ट्याब्लेटहरू उधारो दिन्छन् र उनीहरूलाई यस प्रकारका उपकरणहरू मार्फत कोठामा बत्तीहरू नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छन्।
यद्यपि सिटीहब कोपेनहेगन प्रस्ताव अझ राम्रो छ। टेक्नोलोजी मार्फत उनीहरूले होटेलको भित्ता पछाडि आफ्ना सेवाहरू विस्तार गर्न सकेका छन्। तिनीहरूले एक अनुप्रयोग सिर्जना गरेका छन् कि पाहुनाहरूले उनीहरूको मोबाइलमा निःशुल्क स्थापना गर्न सक्छन्। यस अनुप्रयोगबाट, ग्राहकहरू च्याट गर्न र होटलका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्दछन्। शहरका सबै सडकहरू अन्वेषण गर्दा सल्लाह र सिफारिसहरू सोध्नु यो एक उत्तम उपकरण हो। थप रूपमा, कोठाहरूमा स्टेरियो छ जुन तपाईं ब्लुटुथ मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चीजको सराहना गरिन्छ, सामान्यतया, हामी आफ्नो सुटकेसमा स्पीकरहरू बोक्दैनौं र यो सामान्य चीज हो जुन हामी यात्रा गर्दा हामी सामान्यतया मिस गर्दछौं।
होटल केन्द्रमा राम्रोसँग जडान भएको छ, 550० मिटर टाढा Frederiksberg Allé मेट्रो स्टेशन छ, त्यसैले तपाईलाई प्रमुख पर्यटक रुचि स्थानहरूमा पुग्न कुनै समस्या हुनेछैन। जहाँसम्म, यदि तपाईले सार्वजनिक यातायात लिने महसुस गर्नुहुन्न भने, याद गर्नुहोस् कोपेनहेगन साइकलको शहर हो, तिनीहरू लगभग कहिँ पनि भाँडामा लिन सकिन्छ! थोरै पेडलिंग गरेर, सिटीहब कोपेनहेगनबाट तपाईं डेनमार्कको नेशनल म्यूजियम वा फ्रेडरिक्सबर्ग जस्ता प्रतिनिधि स्थानहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ १० मिनेट भन्दा कममा बगैंचा।
Aperon अपार्टमेन्ट होटेल
कोपेनहेगनको होटेलमा घरका सबै सुखदायक। कहिलेकाँही हामी यात्रा गर्दा हामी रेस्टुराँबाट रेष्टुरेन्ट खाँदै पूरा खर्च गरेको जस्तो महसुस गर्दैनौं, विशेष गरी यदि हामी धेरै पैसा खर्च गर्न चाहँदैनौं र हामी कोपेनहेगन जत्तिकै महँगो सहरमा छौं। यदि तपाईं आफ्नै खाना पकाउने विकल्प छनौट गर्न चाहनुहुन्छ वा यदि तपाईं बस एक परम्परागत होटल कोठा प्रस्ताव भन्दा बढी ठाउँ पाउन चाहनुहुन्छ भने, Aperon अपार्टमेन्ट होटल तपाईंको लागि एक धेरै राम्रो विकल्प हो। यसको सानो अपार्टमेन्टमा चिह्नित डेनिस शैलीको साथ तपाईं आनन्द लिन सक्नुहुनेछ होटलका फाइदाहरू नगुमाईकन घरका सबै सुविधाहरू.
यसैले यसमा भान्छा छ आधुनिक, पूर्ण रूपमा सुसज्जित र एउटा प्रशस्त बैठक कोठाको साथ जहाँ तपाईं शहरमा तपाईंको यात्रा पछि आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई बच्चाहरूसँग यात्रा गर्नुहुन्छ र एकै कोठामा सँगै सुत्नको विचारले तपाईंलाई धेरै अपील गर्दैन भने यो एक धेरै चाखलाग्दो विकल्प हो। साथै, अपार्टमेन्टको सजावट उत्कृष्ट छ। बिभिन्न कोठा धेरै कार्य र आरामदायक छन्, ती विन्डोजले भरिएका छन् जुन तपाईंलाई अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
स्थान को मामला मा, Aperon अपार्टमेन्ट होटल कोपेनहेगनको सब भन्दा मध्य केन्द्र इन्द्रे बाइ जिल्लामा अवस्थित छ, त्यसैले तपाइँको औंलाको छेउमा सबै रुचि को स्थानहरु हुनेछ। प्रसिद्ध रोजेनबर्ग महल केवल just०० मिटर टाढा छ, र तपाईं minutes मिनेट भन्दा कममा नेरपोर्ट स्टेशन जान सक्नुहुन्छ।
द वेकअप कोपेनहेगन- Bernstorffsgade
व्यवसायमा कोपेनहेगन जानेहरूको लागि आदर्श आवास। द वेकअप कोपेनहेगन- Bernstorffsgade मा स्थित छ शहर केन्द्र, काबेनाभन जिल्लामा। यसको स्थान उत्कृष्ट छ। यो धेरै ठूलो पर्यटन रूचि स्थानहरु मा निकट छ रaमा जीवन भरिएको क्षेत्र। होटेलको वरपरका ठाउँहरूमा, तपाईंले अनन्त बारहरू, पबहरू र खानपान गर्न रेस्टुरेन्टहरू भेट्टाउनुहुनेछ, ड्रिन्क पाउनुहुनेछ र डेनमार्कको राजधानीको वातावरण भिजाउनुहुनेछ।
यद्यपि यस होटललाई २०२० मा कोपेनहेगनका best वटा उत्तम होटलहरूको सूचीमा यसले के स्थान बनाउँदछ भन्ने कुरा मात्र हो। द वेकअप कोपेनहेगन- Bernstorffsgade एक छ व्यवसाय मा शहर को यात्रा गर्नेहरूका लागि आदर्श आवास। यसको साधारण क्षेत्रहरू ठूला विन्डोज र ठूला विन्डोजहरूले घेरेका छन् जुन तपाईंलाई रमाइलो गर्न दिन्छ शहरको लुभावो दृश्य। यी क्षेत्रहरूमा विशेष रूपमा कामको लागि डिजाइन गरिएका क्षेत्रहरू छन्। उनीहरूसँग छ bussines केन्द्र, नि: शुल्क प्रयोगको लागि कम्प्युटरहरूसँग, र एकले ठूलो संख्यामा खाली ठाउँहरू प्रस्ताव गर्दछ आरामसँग काम गर्नका लागि।
कोठा एकदम सफा डिजाइनको साथ आधुनिक छन् र ती धेरै ठूलो नभए पनि तिनीहरू पर्याप्त आकारका छन्। उनीहरूसँग एउटा सानो डेस्क छ, अर्को बिन्दुको पक्षमा यदि तपाईं रमाइलोको लागि शहरमा हुनुहुन्न भने। थप रूपमा, कोपेनहेगनको बन्दरगाहमा यसको नजिकको लागि धन्यवाद, त्यहाँ समुद्रको आंशिक दृश्यसहित कोठाहरू छन्।जागेको बेलामा कुन त्यस्तो मनोरम दृश्यको आनन्द लिन रुचाउँदैन?
Br Otchner होटल द्वारा होटल ओटीलिया
विशेष अवसरहरूको लागि आदर्श होटल कोपेनहेगन शहरको डिजाइन र ºº० दृश्य। अन्तमा, आवास जुन २०२० मा कोपेनहेगनमा best उत्तम होटलहरूको सूची बन्द गर्न योग्य छ ब्रुक्नेर होटल्स द्वारा होटल ओटिलिया हो। यद्यपि यो सत्य हो कि यो अरू भन्दा सस्तो र केन्द्रीत छैन, यो धेरै आकर्षणको साथ एक स्थान हो, विशेष अवसरहरूको लागि उपयुक्त।
सौन्दर्य रूपमा, होटल अद्भुत छ। यो १ 160० बर्ष भन्दा बढि डेनमार्कको सबैभन्दा प्रसिद्द शराब बनाउने वस्तुमा निर्मित थियो।, कार्लसबर्ग। पुरानो कारखाना संरचना सहज आधुनिक डिजाइन तत्वहरूको साथ मिश्रित गर्दछ। कारखाना को सबै विवरण राखिएको थियो। फेएडमा समेत the gold सुनका ढालहरूको सम्मानमा जसले पर्खालबाट बाहिर निस्केको थियो जब भाँडा उठाउने उपकरण अझै उभिरहेको थियो, तिनीहरूले केही हड्ताल परिपत्र विन्डोजहरू राखे।
होटलले यसको सुविधा भित्र धेरै सेवाहरू प्रदान गर्दछ: साइकल भाँडा सेवा, स्पा, जिम, पट्टी र रेस्टुरेन्ट। थप रूपमा, प्रत्येक दिन, होटल एक आयोजित गर्दछ खुशीको समय जसमा दाखमद्य नि: शुल्क छ यसको सबै पाहुनाहरूको लागि, रमाइलो गर्न र लामो यात्राको लामो दिन पछि आराम गर्न एक आदर्श घटना।
कुनै श doubt्का बिना, रेस्टुरेन्ट होटेलको सर्वश्रेष्ठ हो। भवनको सबै भन्दा माथि फ्लोरमा अवस्थित छ कोपेनहेगनको सब भन्दा मनमोहक दृश्य मध्ये एक छ। यसैले, तिनीहरूका टेबुलबाट तपाईंले स्वादिलो ​​इटालियन खानाको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ, जब कि डेनिसको राजधानीको ºº०º दृश्य उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ। के यो चाखलाग्दो संयोजन होइन?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » कोपेनहेगन मा6सर्वश्रेष्ठ होटल